Koeman oo ka hadlaya Messi iyo Pique ka hor kulanka El Clásico ee ay la ciyaarayaan Real Madrid – Gool FM
Koeman oo ka hadlaya Messi iyo Pique ka hor kulanka El Clásico ee ay la ciyaarayaan Real Madrid
(Barcelona) 23 Okt 2020. Tababaraha reer Holland iyo kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay barri la ciyaari doonaan Real Madrid ee El Clasico, kaasoo ka tirsan kulamada isbuuca 7-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Ronald Koeman ayaa maamuli doono Barcelona kulankiisii ugu horeeyay ee El Clasico ah, tan iyo markii uu shaqada tababarka ee kooxda kala wareegay Quique Setien.
Haddaba Ronald Koeman ayaa wuxuu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira kulanka berri, xaaladaha ciyaartoydiisa ka hor kulanka El Clasico, iyo dhibaatooyinka jireed ay la dhibtoonayaan ciyaartoyda qaar.
Ugu horreyn Ronald Koeman ayaa yiri:
“Messi ma dhaliyo goolal badan? miyaad u maleyneysaa inaan ku weerari karo Messi halkan dadweynaha dhaxdooda? Messi waa Messi goolal iyo goolal la’aanba”.
Tababare Ronald Koeman ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray:
“Hadalada Gerard Piqué, wuxuu halkan joogay Piqué sanado, aniga kaliya dhowr bilood ayaan joogay, waa nin caqli badan waana ixtiraamayaa fikirkiisa”.